Android အတွက် FIFA Soccer APK ဒေါင်းလုပ်ရယူပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » ဖီဖာဘောလုံး
ဖီဖာဘောလုံး APK ကို
သင့်ရဲ့ Ultimate Team Build နှငျ့သငျစူပါစတားအဆင့်အတန်းမှမဆိုကစားသမားလေ့ကျင့်အဖြစ်ပြိုင်ဘက်အပေါ်ကို ယူ. , တိုက်ခိုက်ပြိုင်ဘက်များနှင့်ကြာမြင့်စွာလတ်ဆတ်နေ့စဉ်အကြောင်းအရာအားလုံးကိုရာသီထိတွေ့ဆက်ဆံ။ Plus အား, 100 ကို MB အောက်မှာတစ်ဒေါင်းလုပ်အရွယ်အစားနှင့်အတူသွားလာရင်းဂိမ်းသို့ရ။
ဓာတုဗေဒသုံးပြီးသင့်ရဲ့ Ultimate Team တည်ဆောက်ခြင်း Start နှင့်သင့်အဖွဲ့သည်တူကလပ်, လိဂ်, ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့ start XI အတွက်လူမြိုးတစျမြိုး၏ကစားသမားများအပါအဝင်သည့်အခါတစ်ဦးခြေထောက်တက်ပေးပါ။ သငျသညျ 550 အစစ်အမှန်အသင်းများကိုကျော်ထံမှကစားသမားကိုရွေးချယ်အဖြစ်သင့်တန်းစီဇယားမှအတိမ်အနက်ကို Add နှင့်တိုင်းပွဲစဉ်မတိုင်မီနည်းဗျူဟာ tweaks ။ လက်ျာဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့်သင့်ကလပ်အတွက် Ultimate ရေးအဖွဲ့ဖြစ်လာစောင့်နေကြလော့။
VS တိုက်ခိုက် mode ကိုနှင့်သင်၏ထိုးစစ်ဥစ္စာသို့သငျသညျ drop ကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာပွဲအပေါ်ကိုယူပါ။ သငျသညျ, 90-ဒုတိယပွဲစဉ်လွှမ်းမိုးဦးဆောင်တက်နှင့်ရာသီအလိုက်ဆုလာဘ်တစ်နှစ်ပတ်လုံးဝင်ငွေဖို့ကွိုးစားနေချိန်တွင်ယှဉ်ပြိုင်မှု၏ဤဆန်းသစ်မှုအဆငျ့မွငျ့မားဂီယာသို့သင့်ရဲ့ဂိမ်းသွားပါသည်။
ဒီ app: တစ် persistent အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု (ကွန်ယက်ကိုအခကြေးငွေလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်) လိုအပ်သည်။ EA ရဲ့ Privacy & Cookie ပေါ်လစီများနှင့်အသုံးပြုသူသဘောတူညီချက်များ၏လက်ခံမှုလိုအပ်သည်။ In-ဂိမ်းကြော်ငြာလည်းပါဝင်သည်။ 13 ကျော်တစ်ဦးပရိသတ်အတွက်ရည်ရွယ်သည်အင်တာနက်နှင့်လူမှုကွန်ယက်ဆိုဒ်များတိုက်ရိုက်လင့်ခ်များပါရှိသည်။ ဒီ app ကို Google Play ဂိမ်းဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုသည်။ Google ကနေ log out သင်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူသင့်ရဲ့ဂိမ်းကစားမျှဝေချင်ကြဘူးလျှင်တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီဂိမ်းန်ဆောင်မှုများ Play ။
30 ရက်ပေါင်း '' အသိပေးစာ ea.com/service-updates အပေါ် posted ပြီးနောက် EA ၏အွန်လိုင်း features တွေအနားယူလိမ့်မည်။
ဘောလုံးပရိသတ်တွေ! ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးကိုဘောလုံးအတွေ့အကြုံကိုသေချာစေရန်အနည်းငယ်သောအရာတို့ကိုမြှင့်။ ကစားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုသငျသညျဖီဖာမိုဘိုင်းခံစားနေပုံကိုသိပါစေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
71.76 ကို MB